musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Updated News » Uko 90 muzana yepasi rose kutemwa kwemasango kunobva
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Updated News
Zvekurima zvinoramba zviri mutyairi mukuru wekuparadza masango mumatunhu ese kunze kweEurope, uko kuvandudzwa kwemadhorobha uye zvivakwa zvine chekuita nepamusoro, chidzidzo chinodaro. Kushandurwa kuita minda yezvirimwa ndiko kunonyanya kurasikirwa nemasango muAfrica neAsia, uye chikamu chinodarika 75 muzana chesango chakarasika chave ivhu. MuSouth America, zvinenge zvikamu zvitatu muzvina zvokutemwa kwemasango kunokonzerwa nokufura kwezvipfuwo.
Kuwedzera kwekurima kunodzinga zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvekutemwa kwemasango pasi rose - kukanganisa kwakakura kupfuura zvaimbofungwa, Sangano reFood and Agriculture Organisation reUnited Nations (FAO) rakataura parikuburitsa zvakawanikwa zveGlobal Remote Sensing Survey nhasi.
Kutemwa kwemasango ndiko kushandurwa kwesango kune mamwe mashandisirwo evhu, sekurima uye zvivakwa. Munyika yose, inopfuura hafu yokurasika kwemasango imhaka yokuchinjwa kwesango kuti rive munda wezvirimwa, nepo mafuro ezvipfuyo ari kukonzera kurasika kweanenge 40 muzana, maererano neongororo itsva iyi.
Idzi data idzva rinosimbisawo kudzikira kwekurasika kwemiti pasi rose uku ichiyambira kuti masango anogara achinaya mvura, kunyanya, ari pasi pekumanikidzwa kukuru kubva mukuwedzera kwekurima.
"Maererano neFAO ichangoburwa yeGlobal Forest Resources Assessment, takarasikirwa nemahekita 420 miriyoni emasango kubva muna 1990," Director-General weFAO QU Dongyu vakadaro nhasi muhurukuro yakagadzirirwa Musangano wechimakumi maviri nenhanhatu weUN Climate Change of the Parties' (COP26) yepamusoro-soro. nhaurirano ine musoro unoti “Upsscaling Actions to Turn the Tide on Deforestation” apo FAO yakaratidza zvitsva zvakawanikwa. Nekuda kweizvi, akasimbisa kuti kuwedzera kurima-chikafu kuzadzisa zvinodiwa zvitsva zvehuwandu hwevanhu uye kumisa kutemwa kwemasango hazvisi zvinangwa zvega.
Kushandura mafambiro ekutema masango uye kuwedzera kufambira mberi kwakahwina kumberi uku kwakakosha kwakakosha kuvaka kumashure zvirinani uye kusvibira kubva kuCOVID-19 denda, Qu akawedzera.
Kuti tibudirire mukuedza kwakadaro, tinofanira kuziva kuti kupi uye nei kuparadzwa kwemasango uye kuparadzwa kwemasango kunoitika uye kuti chiito chinodiwa kupi, Director-General akadaro, achiona kuti izvi zvinogona kuwanikwa chete nekubatanidza hutsva hwetekinoroji nehunyanzvi hwemunharaunda pasi. . Ongororo itsva inoshanda semuenzaniso wakanaka wemaitiro akadaro.
Kuwedzera goho rekurima-chikafu kuzadzisa zvinodiwa zvitsva zvehuwandu hwevanhu uye kumisa kutemwa kwemasango hazvisi zvinangwa zvega. Nyika dzinopfuura makumi maviri dzichiri kusimukira dzakatoratidza kuti zvinobvira kuita kudaro. Zvamazvirokwazvo, mashoko azvino uno anosimbisa kuti kutemwa kwemiti kwakaderedzwa nenzira inobudirira muSouth America neAsia
Masango anogara achinaya mvura ari mungozi
Zvinoenderana nedata idzva, muna 2000-2018, kuwanda kwekuparadzwa kwemasango kwakaitika munzvimbo dzinopisa. Pasinei nekuderera kwekutema miti muSouth America neAsia, masango anogara achinaya mvura munzvimbo idzi anoenderera mberi achinyora kutemwa kwemasango kwakanyanya.
Vatyairi vekutema miti vanosiyana mumatunhu epasi rose
Ongororo inotungamirwa neFAO yakaitwa pachishandiswa dhata resatellite uye maturusi akagadzirwa mukubatana neNASA neGoogle, uye nekubatana kwepedyo nenyanzvi dzenyika dzinopfuura mazana masere kubva kunyika dzinosvika zana nemakumi matatu.
Hurukuro yeHigh-Level Dialogue yakaunza pamwe chete vakuru nevakuru vemasangano ari nhengo yeCollaborative Partnership on Forests kuti vasimudzire zviito zvemamiriro ekunze emusango pasi pechirongwa cheUN Secretary-General on Turning the Tide on Deforestation. Chiitiko ichi chichavawo mupiro mukuru kuStockholm+50 Summit, musangano wechigumi nenomwe weUnited Nations Forum on Forests (UNFF17) uye kuongorora kwakadzama kweSDG17 (Hupenyu panyika) neHigh-level Political Forum on Sustainable. Budiriro (HLPF) muna 15.
Basa reFAO rekumisa kutemwa kwemasango
Tichifunga nezvekubatana kwakawanda pakati pemasango, kurima nekuchengetedzeka kwechikafu, hurongwa hutsva hweFAO huchatungamira kuyedza kushandura masisitimu echikafu kuti ave akanyanya kushanda, anobatanidza, akasimba uye akasimba.
Pamwe chete neUN Development Programme (UNDP) neUN Environment Programme (UNEP), FAO inotsigira nyika dzinopfuura makumi matanhatu mukuita mazano ekuderedza utsi hunobva mukuparadzwa kwemasango nekuparara kwemasango kuburikidza neUN-REDD.
FAO iri kutungamira zvakare Makumi eKudzoreredzwa kweEcosystem neUNEP, mukana wakakosha wekumhanyisa pfungwa dzeutsva muzviito zvekuda chinzvimbo.
Zvakare, ichangoburwa UN Food Systems Summit yakaumba mubatanidzwa pakati penyika dzinogadzira uye dzevatengi, makambani nemasangano epasi rese kumisa kutemwa kwemasango uye kukanganisa kwezvakatipoteredza kwekushandura ivhu kugadzira zvekurima.
The Collaborative Partnership on Forests, inotungamirwa neFAO, ichibatanidza masangano epasi rose gumi nemashanu, iri kugadzira chirongwa chakabatana cheKushandura Mafungu paKuparadzwa kwemasango kuti kukurumidze zviito uye kuwedzera mhedzisiro.